९ वर्षिया नानीलाई बन्धक बनाएर राखेकी यी हजुरआमा, वास्तविकता सुनेपछि उड्नेछ सबैको होस् (भिडियोसहित) – Dainik Samchar
January 23, 2021 235
काठमाण्डौ । एक जना हजुरआमा भन्न मिल्ने बृद्ध महिलाको घरमा एउटी सानी नानी गईछन् । ती नानीलाई देखेर आफ्नै घरमा बसिरहेकी ती हजुरआमा अचम्मै परिछन् । उनको घरको आँगनमा झुक्किएर पुगेकी ती सानी नानी ९ वर्षकी रहिछन् । झुक्किएरै पुगेपनि ती नानी ती हजुरआमाको घरमा ५ दिनसम्म बसिन् । त्यसरी आफ्नो घरमा अचनाक आईपुगेकी नानीको बारेमा ती हजुरआमाले पनि उनी कताबाट आएकी हुन् भनेर खासै सोधिखोजी गरिनन् ।
सामान्यतया कताबाट आएकी हौ ? कोको छन् तिम्रो घरमा ? घर कहाँ हो भन्ने जस्ता प्रश्न गरेकी हजुरआमालाई ती नानीले आफुलाई आफ्नो घरको ठेगाना थाहा नभएको बताईन् । यतिमात्र नभई उनले आफ्नो कोहीपनि नभएको बताएकी रहिछन् । यो कुरा उनै हजुरआमाले बताएकी हुन् । उनको घरमा बस्दा सामान्यतया घरको कामकाज गर्न सहयोग गराएकी रहिछन् । तर त्यही कुरा अहिले तीनै हजुर आमालाई निकै नै भारी परेको छ । ती नानीले आफुलाई ती हजुरआमाले घरको सबै काम गर्न लगाएको र आफ्ना लुगा समेत धुन लगाएको बताएकी छन् ।
त्यतिमात्र नभई उनको घरपनि ती हजुरआमाको घरदेखि केही समयको दुरीमा पर्ने रहेछ । यो कुरा ती हजुरआमालाई सोध्दा आफुलाई ती नानीको बारेमा थाहा नभएको र नानीलाई सोध्दा पनि उनले नभनेको हुनाले उनलाई उनको घरमा पुर्याउन नसकेको बताईन् । अहिले नजिकैको बालिकालाई आफ्नै घरमा बन्धक बनाएर राखेको ती हजुरआमालाई आरोप लागेको छ । यस विषयमा उनी भन्छिन्…….भिडियोसहित
Prevपूरै कार्यकारी अधिकारसहित भोलि एक दिनको लागि मुख्यमन्त्री बन्दैछिन् यी छात्रा
Nextराजमार्गमा खुकुरी देखाएर यात्रुबाहक बस तोडफोड
काठमाडौं कोटेश्वरबाट अचम्मका ब्यक्ती पक्राउ ! स्वयम्भु, सीतापाइला, तीनकुने, कागेश्वरी, मूलपानी सबै ठाउँमा भ्याएछन (2162)